Ukwakha Ukuqoqwa Kuhle Irish Whiskey Whisky Brands | Irish Whiskey .com
Njengoba I umkhankaso Irish Whiskey .com eminyakeni embalwa edlule njengenhlangano inthanethi Irish Whiskey portal, omunye izinzuzo ezingalindelekile bekulokhu fun ngokuthi ngiye ngaba ukuzibandakanya inthanethi nge-Irish Whiskey Abalandeli kusuka emhlabeni wonke. Ayemaningi nogologo newbies futhi ukuba sithembeke, they were my original audience as I set out on a personal crusade to “de-mystify” Irish Whiskey Brands for beginners. Okwangimangaza, Ngiphinde wabutha igenge olukhulu wazibonela nogologo abantu futhi Irish Whiskey aficionados, abaningi babo baye baba abangane abahle kuyo yonke le minyaka.
Le mibuzo emibili esemqoka mina njalo ebuzwa kokubili Wabasaqalayo aficionados kukhona:
Ukuphi okungcono Irish Whiskey izindawo ukubona uma uvakashela e-Ireland futhi ......
Uma ngase ekwakheni siqu Irish Whiskey iqoqo noma ukungeza i-elementi Irish Whiskey ukuba pub yami noma ibha, what would make up a good whiskey card of say twenty or so Irish Whiskey Brands.
Ngakhuluma kumagazini wokuqala uma sihlakulela Irish Whiskey Inqola , Dublin Whisky Inqola futhi Irish Whiskey Indlela amawebhusayithi, okuyinto ukuthuthukisa phezulu Irish Whiskey ukuvakasha asobala esiqhingini Ireland, ekhatsi Dublin City ugudle Wild Atlantic Indlela drive ugu ku-Ireland ama-west coast.
Irish Whiskey Inqola liyisiqondiso smartphone nobungane ezinye zezindawo ezingcono kakhulu nogologo ezokuvakasha zemicimbi nogologo libhala Ireland.
Ngiyavuma ukuthi kwadingeka ngesisusa sobugovu ngokudala lezi Whisky Imikhondo Irish, njengoba wensindiso yami kunekubhala okufanayo "Amathiphu Zezıhlabane" imeyili 500 ukuze 600 isikhathi unyaka abafundi uhlela amaholide abo Whisky Irish lekugcilwe.
Manje, embuzweni wesibili -
Enye yezinto ezinhle ukwabelana nogologo ulwazi nge whiskey Wabasaqalayo ngukutsi kaningi buyelani kimi ukuze babelane ngolwazi yakamuva noma adventure ngeyakho ngokuphenya umhlaba Irish Whiskey angaphezu Jameson.
Manje, phambi IDL abameli wehle phezu kwami, akukho nhlobo okungalungile Jameson. Kuyinto okuqinile, entry level Whisky Irish. Kuyinto nogologo ngendlela efanayo ukuthi Ford Fiesta noma Nissan Micra kuyinto imoto. Sifunda ukushayela ngento eyisisekelo, kodwa njengoba sithola kutetsemba isipiliyoni, sithanda ibenze imingcele futhi umemeze. isivinini angeziwe, okunethezeka ngaphezulu, injabulo ngaphezulu.
Ngempela abantu abacebile ngokuvamile aba nzile izimoto. Imoto sonke isikhathi. A Range Rover ukuze Izwe, A Prius noma Tesla for emzini. A Convertible ngempelasonto. A Ferrari for fun. A Jaguar, Mercedes noma BMW zabahamba ngezamabhizinisi.
abantu abavamile, Njengabanye abaningi abangontanga nathi, kufanele ulandele noma eyodwa imoto evumelana siqu yokuphila kwethu siqu. Thina uyithenga, ukushayela futhi ngezikhathi ukuyishintsha ngomunye entsha ye, ezinkulu noma imodeli ezincane kuye ngezimo zethu kanye nezidingo. ngokuvamile, thina nje ukuthenga inguqulo entsha balokho esiyikho ukushayela kakade. Kuvame okufanayo nogologo Irish. Abantu bafunda ukushayela nge Jameson, ngakho lapho kuba isikhathi ukuthenga ibhodlela entsha, bavame ukuthenga okufanayo futhi ngoba kokubili ajwayelekile futhi elula.
Ingabe Irish Whiskey ukugcina kungcono isitayela eliyingqayizivele futhi uhlamvu?
Lokhu kubangela amahloni yangempela, ngoba abaningi babengakaze sibazi uphuthelwa. Ukuze nje imali encane kakhulu owengeziwe ibhodlela elilodwa futhi ehlome ngolwazi kusukela kulesi sihloko, uhlelo lwami ukuba bangagcini nje kuphela ngokukhuthazelela amandla ukulahla Jameson "Fiesta" izinsuku zakho, kodwa ukuhlola ngokuzethemba, the Jags, Mercs, ngama-BMW, Ibanga Rovers kanye Ferraris we Irish Whiskey Umhlaba.
Kwasukasukela, (lapho ngineminyaka izinyane) ngokuvamile ukuyitshela ukuthi izwe imoto senziwe ngu kungcono isitayela eliyingqayizivele futhi uhlamvu. Ake bathemba ukuthi sigcina ukuthi ukuhlukahluka efanayo izitayela nobunjalo ngaphakathi Whisky Irish. Kungaba isono uma ngelinye ilanga, that all whiskey dumbed down to a mass produced lowest common denominator style.
Esontweni elilodwa noma ngakho, Ngizofika bakubonise nokuthi ungalusebenzisa kanjani kancane kancane ukwakha esitebeleni of ahlukahlukene Irish Whiskey brand nezinkulumo ku siqu Irish Whiskey iqoqo lakho. Ake bangana futhi ukusekela Irish Whiskey Diversity!
Many of you wait to buy a new bottle of Whiskey until the bottle you are currently drinking is empty. Kusiza ekwakheni iqoqo Irish Whiskey ukuzama ukuthenga ibhodlela wakho olandelayo lapho ibhodlela yangaphambilini phakathi 2/3 and ¾ full. Ngaleyondlela, kancane kancane yakha stock whiskeys ukuthi kukhona ingxenye niyinike 2/3 ngokugcwele.
Cishe isikhathi ukuthenga oda ibhodlela lonke likagologo ukuze ungeze Irish yami Whisky Collection
Njengoba inani amabhodlela inyuka, izinga ukusetshenziswa ngamunye ibhodlela liyancipha. Yiqiniso njalo, ibhodlela ngeke uthulule, kodwa ke une choice noma ubuyise brand ekhona noma esikhundleni ngento lifanelwe okwengeziwe ekhabetheni lakho. Uma usuvule ibhodlela lakho lesithathu noma lesine entsha, ungaqala ethi une-Irish Whiskey iqoqo.
Single Embizeni Namanje, Single Malt and Single Grain Irish Whiskey Brands. Hlanganisa it up!
Zama Okudala Whiskeys
ezingeni Ukungena whiskeys emithathu nje ubudala. Qala ayothenga whiskeys amadala. Khumbula, ukuthi nogologo imisindvo, isitatimende yobudala Banikezwa ibhodlela libhekisela omncane kunathi nogologo sakhi ingxube. an 8 Year old blend may contain 8-year-old Single Grain Whiskey but 14 Unyaka Old Single Malt Whisky. Ubudala ngokuvamile unezela ukujula nemikhawulo eyinkimbinkimbi a whiskey.
Konke mayelana Izinkuni.
Lambay Whisky abavuthiwe Irish yabo Single Malt Whisky ku Lambay Isiqhingi e Camus Cognac emiphongolweni eyayibonakala ngokwabo wavuthwa e eweni ohlangothini zewayini kwi French Atlantic ugu lweNyakatho Ile de re.
whiskeys Abaningi manje abe magic okuncane ukungezwa ukunambitheka kwabo nokuba yinkimbinkimbi phakathi nokuvuthwa ngokubhapathizwa eseqedile for ezintathu kuya 12 months or more in casks that previously held rum, i-cognac, iwayini, sherries noma izimbobo . Kukhona imiphongolo eziye ilangabi extra ushiswe futhi kukhona imiphongolo wenza kusukela emahlathini efana ziyadliwa kanye usika izingcezu azidingayo ngokucophelela esikhundleni se-okhi bendabuko.
Emhlophe nogologo zewayini of Lambay Island, nje amamitha ukusuka olwandle.
Emiphongolweni ingaphinda kwi isibopho ngesikhatsi nokuvuthwa ezindaweni ahlukile noma izimo ezifana ezindaweni laseThire elingasolwandle Lambay Isiqhingi ekhatsi Dublin, Cork sasondelana Emafektri ku Little Island e Cork Harbor noma West Cork Distillers eSkibbereen. Zonke fika magic owengeziwe whiskey.
Cask Izikhwepha Whisky Irish
I elula kancane zethusi ingilazi iKhabhinethi ngokuthi uMoya Safe, lapho lukhulu ngalobu buciko kanye magic kagavini ziphuzo zazihluzwa ilawulwa.
The strength of whiskey is measured as the Alcohol by Volume (ABV) iphesenti whiskey. The majority of entry-level whiskeys are bottled at 40% ABV njengoba lena amandla aphansi lapho kungenzeka umoya ithengiswa njengoba whiskey. Ngo nogologo okungukuthi esingaphansi 46% ABV, amafutha zemvelo, amaprotheni esters ku nogologo kungaba eqinisa kanye eyihlathi ndawonye (microscopically) uma nogologo is selehlile ngokwengeza iqhwa noma amanzi chilled. Lokhu kungadala i-cloudiness okuncane noma ufasimbe ku whiskey. Nakuba lokhu cloudiness akuyona ingozi ngokuphelele, izinkampani eziningi nogologo ozithokozisa le whiskey kanye nokuhluza lezi zingxenye ngaphambi bottling nodaba. Lokhu kubizwa ngokuthi “Chill Ukuhlunga. Kukhona isikole ukucabanga ukuthi Chill Ukuhlunga kususa ezinye ubuhle kusuka whiskey, kodwa uma kwenzeka, kungcono nomphumela okuncane. premium whiskeys Abaningi bevalela ngesikhathi 46% baphathe ilebula “Non Chill ehlungiwe” okuyinto kancane engadingekile ngoba njengoba manje ukwazi ngemva kokufunda lesi, akukho isidingo ozithokozisa isihlungi 46%+ ABV.
Ukuvula cask nogologo okokuqala lokuphuza imimoya ukukhula njalo yisikhathi esikhethekile futhi ongasoze.
Whisky lapho kuthathwe ngokuqondile cask liye wavuthwa e ngokuvamile ngesikhathi namandla cask azungeze 52% ABV ukuze 60 % ABV. Ngaphambi bottling, i-whiskey buhlanjululwe phansi amandla bottling oyifunayo nge okuhlanzekile amanzi de-amatshe aligugu. amandla Cask Whisky uya ngqo ibhodlela!
A nojeke kwamanzi okulula ekamelweni lokushisa kuzokusiza ukujabulela esiphezulu kusukela nogologo yakho.
Lapho ngokunambitha noma ukuphuza whiskey, aficionados onjengami ngokuvamile engeza amanzi ukuze nogologo yethu. Kunezizathu ezimbili eziholela kulesi. Okokuqala, amanzi ikani “mawuvuleke” a nogologo ukukhulula ukunambitheka ngaphezulu kanti iphunga.
Okwesibili, uma ukuphuza nogologo Lihle, ngeke ngokuvamile ukuzwa ukuvutha liphinyiselwe noma ukushoshozela ukuzwa emlonyeni wakho kusukela utshwala. Ayanda amandla, the siyaphazamisa ngaphezulu futhi singathandeki lo mphumela kungaba. Ngolwazi lwami, lokhu ezishile utshwala isithiyo elikhulu ukuguqulela nogologo izimfundamakhwela ziyaye isizwe whiskey.
Amanzi kuyisihluthulelo engxenyeni yokugcina Whisky ukwenza inqubo, ngabe ungeze yi distillery at bottling noma nguwe ingilazi yakho.
Yingakho ngisho wazibonela nogologo aficionados onjengami cishe njalo ukwengeza amanzi ukuze nogologo yethu Lihle ukuze ababulale noma zilawule le utshwala kuvuthe futhi nokwandisa ukunambitheka nogologo yethu eyigugu futhi iphunga. Njengoba nozwela ekhaleni nolwanga wonke umuntu uhlukile, umthamo wamanzi okudingekayo ukuze ukubulala utshwala niyishise nogologo kwakho kuyoba okuhluke kakhulu kwesami. Yingakho-Irish Whiskey lakudala ka “ungalokothi ukudicilela nogologo omunye umuntu”. I ingilazi esiphelele Whisky Irish ingenye nhlobo ezishile noma yangithinta enhliziyweni emlonyeni ngokuvumela ukunambitheka esiphezulu futhi ukunambitheka kufanele kujatshulelwe.
Whisky ukuthengiswa amandla cask uyohlale ezibizayo okuningi, njengoba ilitha amandla cask nogologo ngesikhathi 60% ABV ngabe ukuguqulela ilitha nengxenye kagavini uma buhlanjululwe futhi bevalela ngesikhathi 40%. Ngenxa aficionado whiskey, enye yezinto ezinhle oluphethe ibhodlela Cask Amandla Whisky Irish wukuthi wena ngokwakho abe ingxenye yokugcina yaleli inqubo nogologo ukwenza njengoba uwathatha nogologo ngokuqondile kusukela cask futhi alulaze ke ekhaya, one glass at time, ku siqu inkulumo yakho siqu ukuthi brand whiskey.
Ziningi-premium ezingabizi whiskeys Irish ngesikhathi 46% nangaphezulu kuze Amandla umnyuziki Cask ku zamashumi amahlanu okusezingeni eliphezulu.
Hyde 8 Unyaka Old Single Grain Whisky is bevalela ngesikhathi Amandla Cask ka 59% ABV. Nge Cask Amandla Whisky, Engxenyeni yokugcina inqubo Whisky ekwenziweni kuyinto ikhasimende lapho ukwengeza amanzi nogologo engilazini.
Stuart sika Irish Whiskey Collection Starter Pack Umhlahlandlela
Esihlokweni wami olandelayo, Ngizobuya wabelane izincomo zami siqu nanhlanu enkulu, kodwa Whiskeys ezingabizi Irish kuyiphi ukwakha siqu kuqala Irish Whiskey iqoqo lakho. Ngizobuya futhi wengeze kwabahlanu Whiskeys non-Irish futhi abanye Gin Irish, Irish Vodka futhi Poitín Irish uMoya izinkulumo kulabo abafuna ukuhlola izwe ebanzi Whisky nezinye Imimoya.
Ngo kwakhiwa izincomo zami, Ngiye ngazama ukuba uhlanganise ezahlukene Irish Whiskey Izitayela, Blends, Ages, Kuphela futhi Izimfanelo. Konke Whiskeys efakwe kufanele kube ezingabizi futhi butholakala kalula Ireland ngokusebenzisa Super Valu, O'Briens noma izitolo nogologo zendawo ezifana Celtic Whisky Isitolo e Dublin.
Ukuze abafundi bethu ngaphandle Ireland, Ngizokwenza amalinki brand akhethiwe nezinkulumo ku-Amazon. You should also be able to mail order everything listed from trusted online whiskey stores such as Master of Malt and The Whisky Exchange.
Ngiye letihlungiwe le Whiskeys inyuka oda usebenzisa yethu Pooka Whisky Scale kusukela Pooka Omunye “Whiskeys Everyday” ukuze Pooka Amabili “Premium Whiskeys”.
Ayikho nogologo akhethiwe izobiza phezu € 100 futhi iningi kufanele kube nje kwesigamu ukuba izingxenye ezimbili kwezintathu zabantu ukuthi value okungenani.
Ekugcineni, njengoba mina sekushiwo, Mina luzobandakanya nezinye whiskeys ambalwa waseScotland, Japan neNdiya kanye nice Gins ambalwa Irish, a Vodka kanye Poitín Irish uMoya, ulolonge iqoqo lakho.
Mina Sizoshicilela umnyuziki yami, letiphakanyisiwe ohlwini Irish Whiskey Collection lapha IrishWhiskey.com kamuva kuleli sonto.